राजधानिको विश्वविद्यालयमा शक्तिशाली बम बिस्फोट, ८ जनाको मृत्यु, के भन्छ प्रहरी ? — Sanchar Kendra
राजधानिको विश्वविद्यालयमा शक्तिशाली बम बिस्फोट, ८ जनाको मृत्यु, के भन्छ प्रहरी ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय बम बिस्फोटका घटनाहरु बढ्दै गईरहेका छन । यस्तै आत्मघाती बिस्फोटका कारण जनमानसमा त्रास फलिएको छ । सुरक्षा निकायलाइ समेत चुनौती दिने यस्ता भयानक बम बिस्फोटका घटना बाहिर आइरहेका बेला फेरी राजधानिको एक विश्वविद्यालयमा शक्तिशाली बम बिस्फोट भएको छ । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित काबुल विश्वविद्यालयमा भएको बम विस्फोटमा परी ८ जनाको मृत्यु भएको छ । विश्वविद्यालयको दक्षिणतर्फको प्रवेशद्वारमा शुक्रबार भएको बम विस्फोटमा अन्य ३३ जना घाइते भएका जनाइएको छ । स्थानीय समयाअनुसार शुक्रबार बिहान ७ः१० मा उक्त विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ । स्नातकोत्तर तहको परीक्षाका लागि विद्यार्थीको प्रवेश हुने क्रममा विस्फोट भएको थियो । अहिलेसम्म बम विस्फोटको जिम्मा कसैले लिएको छैन । अधिकारीहरुले भने विस्फोटको अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएका छन् ।
त्यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकी जलसेनाले स्ट्रेट अफ होर्मुज भनिने समुद्री मार्गमा इरानको ड्रोन खसालेको बताएका छन् । उक्त ड्रोन अमेरिकी पानीजहाजभन्दा झन्डै एक किलोमिटरनजिकै उड्न थालेपछि खसालिएको ट्रम्पलाई उदृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ । गत जुनमा अमेरिकाको ड्रोन खसालेको इरानले भने अमेरिकाले दाबी गरेअनुरूप इरानको ड्रोन नखसालिएको बताएको छ । ह्वाइट हाउसमा बोल्दै ट्रम्पले हालको घटनालाई इरानले अमेरिकालाई उत्तेजित बनाउने प्रयत्न गरेको बताउँदै आफ्ना अधिकारी, सामग्री र स्वार्थको रक्षा गर्ने अधिकार अमेरिकासँग रहेको बताएका छन् । यसअघि खाडीमा १० लाख लिटर तेल तस्करी गरेको भन्दै इरानले एउटा विदेशी तेल ट्याङ्कर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
गत मे र जुन महिनामा इरानले दुई पटक ओमानको खाडीमा तेल ट्याङ्करहरूमाथि आक्रमण गरेको अमेरिकाले आरोप लगाउदै आएको छ। तर तेहरानले भने आरोपको खण्डन गरेको छ । अमेरिका र इरानबीच सम्बन्ध तनावग्रस्त रहेको र यी घटनाहरूका कारण उक्त क्षेत्रमा सैन्य सङ्घर्ष सुरु हुन सक्ने भय उत्पन्न भएको छ। अमेरिकाले सन् २०१५ मा इरानसँग भएको बहुपक्षीय पारमाणविक सम्झौताबाट भिन्न भएर तेहरानमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाएयता खाडी क्षेत्रमा तनाव चुलिएको छ। इरानले यसअघि आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको भन्दै अमेरिकी ड्रोनलाई स्ट्रेट अफ होर्मुजमै खसालेको थियो। तर अमेरिकाले भने उक्त ड्रोन आक्रमणमा पर्दा इरानको हवाई क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने समुद्री क्षेत्रमा रहेको बताउँदै आएको छ।
उता पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री शाहिद खकान अब्बासी भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । जवाफदेहीतासम्बन्धी त्यहाँको निकाय न्याशनल अकाउन्टेबिलिटी ब्युरोले यसअघि प्रमुख विपक्षी दल पीएमएल-एनका नेता अब्बासीलाई बयान दिन बोलाएको थियो। उनको सरकारले गरेको एलपीजी ग्यास सम्बन्धी एउटा सम्झौतालाई लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो। अब्बासीले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताउने गरेको बीबीसीले जनाएको छ । अघिल्लो महिना पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका नेता आसिफ अली जर्दारीलाई झुठ्ठा ब्याड्ड्क खाता सम्बन्धी आरोपलाई लिएर गिरफ्तार गरिएको थियो।
विपक्षीहरूले इमरान खान नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारको आरोपलाई देखाएर राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई जेल पठाइरहेको बताउने गरेका छन्। ब्युरोको १२ सदस्यीय टोलीले अब्बासीलाई पक्राउ गरेको थियो। पाकिस्तानी समाचार च्यानल डन न्यूज टिभीका अनुसार पत्रकार सम्मेलन गर्न निक्लिएका बेला उनलाई गिरफ्तार गरिएको थियो। शुरूमा गिरफ्तारीको विरोध गरेपनि उनले पछि आफूलाई ब्युरोका अधिकारी समक्ष समर्पण गरेका थिए। कानुनी प्रक्रिया अनुसार शुक्रवार उनलाई अदालतमा पेश गरिनेछ। अब्बासी सन् २०१७ को अगष्टमा पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए।